Expert Semalt: Olee otú Email Marketing si arụ ọrụ na SEO
Nchọnchọ Nchọpụta Ngosi na-eguzo n'elu ogidi isi abụọ, nke na-abawanyearụmọrụ weebụ na nleta saịtị. Nhazi njirimara na-arụ ọrụ na nhazi, arụmọrụ, ihe dị iche iche, na isiokwu dị na ya, nke ahụ bụdị mkpa maka azụmahịa na ndị na-ekiri ya. Ntucha njirimara nke ntaneti na-ezo aka na mpempe akwụkwọ mpụga na njikọ ndị na-ebute ndị nlekọta namkpokọta. Email na-emetụta SEO site na ihe abụọ a.
Jack Miller, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-akọwa otú mgbasa ozi ahịa ahịa email si emetụta arụmọrụ SEO gị na ya.
Ihe mgbaru ọsọ nke isi
Mgbasa ozi ahịa ahia na-emetụta ọchụchọarụ ọrụ engine n'ihi ihe ndị na-esonụ:
Njikọ inbound. Ngalaba ikike nchịkwa na-achịkwa arụmọrụ na ọchụchọengine site na ịchọpụta ọnụọgụ nke njikọ ndị na-eduga ndị mmadụ na saịtị, ụdị ha dị iche iche na ikike dị elu nke isi mmalite ebe nrụọrụ weebụ. Ikenjikọ dị iche iche ga-enyere gị aka iru asọmpi. Ndị ahịa Email na-emetụta ndị mmadụ site na ịmepụta njikọ ndị na-akpakọrịtaederede na saịtị ahụ, nke na-eme ka ha jide n'aka na ịnweta ha ga-anọgide na-abịa n'ọdịnihu.
Nkwalite Ọdịnaya. Email ahịa na-eme ka ọhụụ nke n'ozuzuọdịnaya. Dịka ọmụmaatụ, ịmepụta otu izu ụka kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa na-egosi ihe ndị kachasị ewu ewu, na-eme ka okporo ụzọ dị elu.
Njikọ aka na saịtị Google na-ekpebi uru uru nke saịtị anyochaa uzo okporo ahia ya na onu ogugu ndi ozo. Ọ bụrụ na ị nwere ọdọ mmiri nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ, mgbe ahụ ịchọta ọkwa nke ebe nrụọrụ weebụ ga-abụdị elu karịa ma ọ bụrụ na i nweghị ndị na-ege ntị.
Ihe mgbaru ọsọ nke abụọ
Ndị a bụ ihe ndị ọzọ na-eme ka ogo weebụ nyochaa site na ahịa ahịa email:
Nkwekọrịta Mgbasa Ozi. Ọrụ sitere na mgbasa ozi na-enweghị ihe ọ bụlammetụta na SEO. Otú ọ dị, ikesa ọdịnaya na ịmepụta ihe na mgbasa ozi mgbasa ozi pụtara na ika ahụ ruru ọtụtụ ndị na-ege ntị. Nsonaazụ bụọhụụ dị ukwuu nke a na - emepụta ọbụna ohere ka ukwuu iji dọta njikọ aka na profaịlụ.
Nkọwapụta Ụlọ. Email ahịa na-enyere aka ịmepụta azụmahịa,si otú ahụ na-adọta ndị ahịa ọhụrụ ma debe ndị dị adị. Ihe ka ukwuu aha a bụ, nke ka elu bụ ohere nke igosi ya na njedebeakwụkwọ, nke na - eduga na ndị na - emetụta ndị mmadụ.
Nyocha dị ogologo oge. Nchịkọta akụkọ gbakọtara na emailMgbasa ozi ahịa na-enye aka ịmepụta atụmatụ maka ịzụlite ogologo oge. N'iji ozi a, ọ ga-ekwe omume ịmataKedu ihe bụ ezigbo ndị gị na akwụkwọ ndị kachasị ewu ewu.
Ihe ịga nke ọma Atụmatụ
Kwụsị ịzụta otu ihe kpọmkwem nye ọha na eze. Kama nke ahụ, lekwasị anyaedepụta ihe mbụ na ihe bara uru, ihe onwunwe, na ohere.
Onye kwesịrị ikwe ka ndị debanyere aha jikọọ na listi email ahụ, nke nwere mmasị.
Izipu ọtụtụ ozi ịntanetị nwere ike ịmanye ndị debanyere aha ka ha wepu aha. Nnukwu ọdịnaya bụiwe iwe, ndị mmadụ weere ya dị ka spam. Debe ọdịnaya ahụ na ihe dị mkpa dị mkpa.
Ekwesịrị ịdị na-arụ ọrụ. Email ikpo okwu egwumepee na pịa, na-enye nghọta na otu ndị mmadụ si eme omume ma ọ bụ na-emekọ ihe na-atụle.
Google anaghị agbagha site na ozi ịntanetị. Otú ọ dị, ahịa email abụghị ihe efumaka SEO ozugbo o nwere ike imetụta omume ụmụazụ gị, nke nwere ike ịme ka ma ọ bụ belata ọkwa gị. Ndị ahịa nke Mkpụrụ akwa egosiputa irè nke imekorita ozi ahia na ulo oru SEO Source .